Ọrụ | Jiangsu Kaichuang International Trade Co., Ltd.
Ihe ọ bụla anyị na-eme, naanị ka ndị ahịa nweta ọtụtụ uru na ahịa iji nwetakwuo ohere azụmaahịa iji mepụta ọnụ ahịa ndị ahịa na obodo.
"Ahịa na-agba mbọ", anyị na-enye a zuru nso nke àgwà ọrụ maka ndị ahịa anyị.
Nnyocha nlele efu
Nye ihe nlele
Zaghachi Iji Nka na ụzụ
Nabata arịrịọ ọrụ
Hergbaso na "ahịa afọ ojuju dị ka ndị na-elekwasị anya, na-aga n'ihu mma mma, ịchụso mma mma" àgwà policy.Stre ngwaahịa mmepụta na nlekota usoro. Lekwasị anya na melite isi asọmpi nke ụlọ ọrụ.Production nnyocha Na nlezianya dị na mba àgwà ụkpụrụ. Site na-achịkwa akara nke mmepụta akara, ọ bụla usoro onwe-nnyocha, ibe ego na ọkara okokụre nnyocha, okokụre ngwaahịa nnyocha iji hụ na onye ọ bụla ngwaahịa bụ a pụrụ ịdabere na na magburu onwe quality.Win aha si ahịa na ahịa id Rapid bilie ghọọ onye ndu na ulo oru nhazi aluminom.
Nnwale siri ike, Ọrụ nchekwa
Mingtai na-egbo mkpa nke onye ọrụ yana njikwa usoro njikwa niile, site na aluminom ingot ị nweta, nrụpụta,
usoro mmesi obi ike na nsuso nke usoro, nke na-enye nchebe maka ndị ọrụ.
Site na Nnyefe
Site na nkwekọrịta ahịa, onye na-ahụ maka ịdebe iwu na-enyocha ụdị na oke nke alloy alloy.
Nnwale Ogo Ogologo Mbupu
Mgbe emechara ngwaahịa mepụtara, onye nyocha dị mma ga-enyocha ogo nke ngwaahịa ọ bụla, were foto ma zigara ha ndị ahịa.
Lelee ihe mgbe ị na-akwakọba ihe
Tupu nkwakọ ngwaahịa na Mbupu, onye na-ahụ maka ịdebe iwu na-enyocha ihe ndị akwakọtara ọzọ na ndepụta nchịkọta iji zere ọnwụ nke ihe.
Nabata nkwakọ osisi iji mechie alloy alloy, gbochie ọxịdashọn nke alloy alloy, ma kwe nkwa nnyefe zuru oke nke ngwaahịa na ụzọ kachasị ọsọ, nke dị nchebe ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi.
Site na atụmatụ nke na-eme nyocha saịtị ndị ahịa, anyị na-enye ndị ahịa usoro ọrụ zuru oke nke na-etolite oke mkpuchi zuru oke, akụkụ atọ, na-eme ka ndị ahịa nwee ọgaranya na izu oke.
Ndụmọdụ ngwaahịa: ceptnabata ndụmọdụ gbasara ọrụ na ụbọchị 365 n'afọ.
Strong oru otu: Oru oma na teknụzụ ngwọta na-omenala-emere gị.
Zọ dị iche iche iji chọta anyị: E-mail, Tel, Skype, Facebook, Twitter, Linkedin, Ntaneti ...ntanetị ...
Ọrụ n'oge ire ere
* Nnukwu osisi mmepụta ihe.
* Na-eme mgbe niile na ọganihu nke ngwaahịa a.
* Nnyocha ule tupu ha ebuga ndị ahịa.
Qualitylọ ahịa ọrịre dị elu ma nwekwaa ọfụma ga-enye gị ntụzị ngwaahịa na atụmatụ nkọwapụta mgbe ị nyochasịrị ihe ị chọrọ. Mgbe ị nyechara iwu, ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na - ewepụta ngwaahịa dị elu maka gị, yana site na ngalaba nyocha, ngalaba nyocha nyocha na ọkwa nyocha ndị ọzọ, iji hụ na ngwaahịa ngwaahịa ahụ na - ezute mba na ndị ahịa chọrọ nke ndị na - egosi ya.
The mgbe-sales ọrụ otu ga-eme ndokwa ọkachamara lọjistik consignment n'ihi na ị na-eso dum usoro iji hụ na nchekwa nke gị na ngwongwo; ma ọ bụrụ na ị nwere ugboro ugboro ị nweta mkpa, na mgbe-sales ọrụ otu ga-eme ndokwa mgbe nile maka gị; ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ banyere ngwaahịa mma, mgbe-sales ọrụ otu ga-enye ngwọta maka gị ozugbo o kwere omume.
Kaichuang aluminom na-enye gị usoro zuru ezu, arụmọrụ na ọrụ butler. Ọ bụla iji, si tupu ahịa alo na mgbe-sales nnyefe, anyị na-adọ nsuso iji hụ na ahịa nwere ike na-enweta ngwongwo n'enweghị, butler ọrụ, chiri anya, ọzọ pụrụ ịtụkwasị obi. Anyị na-anabata ndị ahịa ileta anyị factory. Anyị nwere ike ịnye ihe nlele ahụ n'efu. Na usoro nyocha ngwaahịa, anyị na-ahazi nnwale mmepụta dịka ụkpụrụ ụwa si dị. Site nlezianya nlezianya ego nke mmepụta akara ọ bụla usoro onwe-nnyocha, ibe ego na ọkara okokụre nnyocha, okokụre ngwaahịa nnyocha, Anyị na-hụ na bụla mpempe anyị na pụrụ ịdabere na. Nzukọ na izu ọ bụla, iji chọta nsogbu, dozie ha maka ọrụ ka mma. Ọ bụrụ na efere aluminom anyị nwere nsogbu ọ bụla, anyị ga-anwa ike anyị niile idozi nke ahụ.
aluminum checkered mpempe akwụkwọ price, Ngwa ala Aluminom, aluminum alloy 6061 ọnụahịa, Anodized Aluminium mpempe akwụkwọ Metal Suppliers, Mpempe akwụkwọ Aluminom Aluminium, 7050 aluminum mpempe akwụkwọ,